Monday May 04, 2020 - 11:11:17 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Boqolaal qoys oo ku dhaqan magaalada Beled Weyne ayaa bilaabay in ay isaga barakacaan guryahooda kadib markii uu fatahaad bilaabay wabiga Shabeelle.
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in biyaha fatahaadda wabiga ay gaareen gudaha magaalada Beled Weyne iyo deegaannada hoos yimaad, illaa 500 oo qoys ayaa la sheegay in ay ka barakaceen xaafado katirsan xarunta gobolka Hiiraan kadib markii uu wabigu fatahay.
Maamulka ka jira magaalada Beled Weyne ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo ay uga hor tagayaan fataahadda wabiga, inkastoo biyaha magaalada ku butaacay ay yarihiin hadane cabsida ayaa sare ukacday kadib markii wabigu uu biyo xad dhaaf ah keenay saacadihii lasoo dhaafay.
Xaafadda Laanta dhagax jabis waa meesha ugu daran ee ay isaga firxanayaan qoysaskii deganaa, roobab mahiigaan ah oo saacado badan da'ayay ayaa lagasoo sheegayaa xad beenaadka uu gobolka Hiiraan la wadaago Soomaaligalbeed arrinkaas oo sare uqaaday biyaha wabiga Shabeelle.
5 bilood ka hor ayuu sidaan oo kale wabiga Shabeelle ugu fatahay magaalada Beled Weyne iyo deegaanada hoos yimaad,degmada Qallaafe ee dhulka Soomaaligalbeed oo uu maro wabiga Shabelle ayaa la sheegay in gabi ahaanteedba ay maasheeyeen biyaha wabiga.
Jabhadda TPLF oo duqeymo cusub ka geysatay magaalada Asmara.